Newsjacking သည်မကောင်းသောနည်းဗျူဟာတစ်ခုမဟုတ်ပါ Martech Zone
ဒီသီတင်းပတ်အတွင်းနာမည်ကျော်ကြားလာတာသူ့အသက်ကိုကြေကွဲဝမ်းနည်းကြေကွဲစေခဲ့တဲ့သတင်းကိုကန ဦး ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေခဲ့ပြီးနောက်အွန်လိုင်းမှာဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာကိုစပြီးစဉ်းစားလာသည်။ လူမှုရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုတောင်မှငါကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေကသူတို့ရဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဆီကိုအသွားအလာ (နှင့်ပိုက်ဆံ) ပိုပြီးမောင်းနှင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သတင်းကိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ထဲတစ်နည်းနည်းနဲ့တစ်နည်းနည်းနဲ့ကြိုးစားယိမ်းယိုင်လိမ့်မယ်လို့ငါ့ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုတောင်အဆင့်မြှင့်ခဲ့တယ်။ ငါအဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာ LinkedIn မှာပထမဆုံးထုတ်ဝေတာကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်။ ဟုတ်ပြီ
ဤသည်မူလကရေးသားခဲ့မဟာဗျူဟာမဟုတ်ပါဘူး David Meerman Scott ခေါ်တော် သတင်း.
သတင်းဖြေ။ ။ အမှတ်တံဆိပ်ကိုဒီနေ့သတင်းတွေထဲထည့်သွင်းခြင်း၊ အကျယ်ဆုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့မျက်စိကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့လှည့်ကွက်တစ်ခုဖန်တီးပေးခြင်း။
ဒီနေရာမှာ Ken Ungar က Newsjacking အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းပါ။ Ken Ungar သည် Indianapolis အခြေစိုက်အားကစားနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီဖြစ်သော U / S Sports Advisors ၏ဥက္ကpresident္ဌဖြစ်ပြီး Chicago နှင့် Charlotte တို့တွင်ရုံးများရှိသည်။
ငါဆန့်ကျင်ဘူး သတင်း။ လူကြိုက်များမှုမြင့်တက်လာပြီးသင်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအခါ၎င်းကိုအသုံးချသည့်သတင်းပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုယူခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသည်။ ဥပမာတစ်ခုမှာတစ်စုံတစ်ယောက်သည်တရားမ ၀ င်သောအခကြေးငွေများကိုပြောင်းရန်ကြိုးစားနေသည့်စိတ်ရှုပ်စရာခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အဓိကကေဘယ်ကုမ္ပဏီနှင့်မကြာသေးမီကဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသတင်းများဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ကုမ္ပဏီတွင်ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ၀ န်ဆောင်ခများမပါရှိပါက… [ကုမ္ပဏီအမည်ထည့်သွင်းခြင်း] ကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့တွင်အခကြေးငွေမလိုပါ” ကိုသိသောသတင်းဆောင်းပါးဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးသားခြင်းသည်ခေါင်းစဉ်များလူကြိုက်များလာသောအခါသင့်အားအတော်လေးအာရုံစိုက်လာနိုင်သည်။
ဒါပေမဲ့ဒီဟာမတူဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အသုံးအနှုန်းများကိုထိုးဖောက်ရန်မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ၊ သို့သော်ယခုအပတ်ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ခဲ့သည့်ကြိုးစားမှုများကိုကျွန်ုပ်ခေါ်ဆိုနိုင်သည် သတင်းဟက်ကာ.
သတင်း Hacking။ သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်သည့်အခါအသွားအလာနှင့်ကျော်ကြားမှုအပေါ်အမြတ်ထုတ်ရန်အထူးအာရုံစိုက်မှုဖြစ်စေရန်နှင့်အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကိုရေးသားသောကြီးမားသည့်သတင်းပုံပြင်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်။
အင်တာနက်ကိုဖြတ်ပြီးရေးသားထားသောမယုံကြည်နိုင်လောက်သည့်ဆောင်းပါးများနှင့်သူ့အသက်ကိုကျော်လွှားခဲ့သောကျော်ကြားမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်မှုများရေးသားခဲ့သည်။ သူတို့ကတကယ်ထိမိပြီးရိုသေလေးစားမှုမရှိတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူး။ ငါဆောင်းပါးများအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။
အချို့သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသမားများကဤအဖြစ်ဆိုးကိုကြုံတွေ့ရပြီးသူတို့၏လမ်းကိုအာရုံစူးစိုက်ရန်ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်နာမည်ကြီးမင်းသမီး၏နာမည်ဖြင့်သက်ဆိုင်သည့်ဆောင်းပါးများကိုရေးသားခဲ့သည်။ ဆောင်းပါး သင်၏လုပ်ငန်း [ထည့်သွင်းအနုပညာရှင်အမည်] ကနေသင်ယူပါရနိုင်ပါသလား5သင်ခန်းစာများ။ ငါသတ်သတ်မှတ်မှတ်ခေါင်းစဉ်တက်အောင်လုပ်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါသက်သေခံခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးတွေကအရမ်းဆင်တူတယ်။ လူမှုမီဒီယာနှင့် SEO တွင်ထင်ရှားကျော်ကြားရန်နာမည်ကျော်ကြားသူအမည်ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ငါသူတို့ဘာတွေတွေးနေတယ်၊ ​​ဒီအဖြစ်ဆိုးရဲ့နောက်ကျောမှာနှစ်ကောင်ထပ်ရောင်းဖို့ကြိုးစားနေတာငါမမြင်နိုင်ဘူး။
မလုပ်ပါနဲ့ အဲဒီလိုလုပ်တာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အမှတ်တံဆိပ်တွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာချက်ချင်းပဲကျွန်တော့်ကိုရိုသေလေးစားမှုပျောက်သွားတယ်။ သူတို့ကိုငါ လိုက်၍ မရပါ၊ ကျွန်ုပ်၏စာဖတ်စာရင်းမှသူတို့ကိုဖယ်လိုက်သည်။ ရေတိုအတွက်၊ သူတို့ဟာကျွန်တော့်ကိုထာဝရဆုံးရှုံးသွားတယ်။ ၎င်းသည်မည်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အတွက်မျှမထိုက်တန်ပါ။ ထိုအရိုးရှင်းစွာဘုံလျောက်ပတ်စွာ၏ကျော်လွန်ပြီးအပြင်ဘက်မှာပါပဲ။
Tags: အမှတ်တံဆိပ်ကျော်ကြားDavid Meerman Scottသေဆုံးခြင်းhackingken ungarသတင်းဟက်ကာသတင်း-jackသတင်းအလှမျးအဆှေးဦး / s အားကစားအကြံပေးများ
မျှတသော Twitter Feed ကိုထိန်းသိမ်းရန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်သိကောင်းစရာများ
သြဂုတ် 15, 2014 မှာ 9: 39 AM
Doug ဂရိတ် post! မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! မင်းဒီမှာတင်ထားတာကိုငါသဘောတူတယ်